TenX စျေး - အွန်လိုင်း PAY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို TenX (PAY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ TenX (PAY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ TenX ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $7 380 646.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ TenX တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
TenX များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TenXPAY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0593TenXPAY သို့ ယူရိုEUR€0.0503TenXPAY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0455TenXPAY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.054TenXPAY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.528TenXPAY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.374TenXPAY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.31TenXPAY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.221TenXPAY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0785TenXPAY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.083TenXPAY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.32TenXPAY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.46TenXPAY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.319TenXPAY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.44TenXPAY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.10.02TenXPAY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0814TenXPAY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0908TenXPAY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.84TenXPAY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.412TenXPAY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.34TenXPAY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩70.31TenXPAY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦22.99TenXPAY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.33TenXPAY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.63
TenXPAY သို့ BitcoinBTC0.000005 TenXPAY သို့ EthereumETH0.000155 TenXPAY သို့ LitecoinLTC0.00109 TenXPAY သို့ DigitalCashDASH0.000654 TenXPAY သို့ MoneroXMR0.000666 TenXPAY သို့ NxtNXT4.63 TenXPAY သို့ Ethereum ClassicETC0.00875 TenXPAY သို့ DogecoinDOGE17.13 TenXPAY သို့ ZCashZEC0.00072 TenXPAY သို့ BitsharesBTS1.83 TenXPAY သို့ DigiByteDGB1.9 TenXPAY သို့ RippleXRP0.211 TenXPAY သို့ BitcoinDarkBTCD0.00205 TenXPAY သို့ PeerCoinPPC0.197 TenXPAY သို့ CraigsCoinCRAIG27.05 TenXPAY သို့ BitstakeXBS2.53 TenXPAY သို့ PayCoinXPY1.04 TenXPAY သို့ ProsperCoinPRC7.45 TenXPAY သို့ YbCoinYBC0.00003 TenXPAY သို့ DarkKushDANK19.05 TenXPAY သို့ GiveCoinGIVE128.56 TenXPAY သို့ KoboCoinKOBO13.52 TenXPAY သို့ DarkTokenDT0.0547 TenXPAY သို့ CETUS CoinCETI171.44